Voanjo na voanjo, tombony sy fanoherana | Sakafo Nutri
PaÃ¼ Heidemeyer | | Vatsim-pivelomana, aretina, sakafo, fahasalamana
El Ny voanjo na ny voanjo dia anisan'ny voa voadio indrindra eto amin'izao tontolo izao, satria ampiasaina hanamboarana vokatra samihafa izay anisan'ny sakafo ara-tsakafo ankehitriny, manomboka amin'ny menaka, hena, vatomamy, mofomamy, sns., miaraka amin'ny tombony be dia be, nefa koa miaraka amin'ny fanoherana sasany.
Ny voanjo na voanjo dia manankarena Mahasalama toy ny vitamina E, manganese ary Resveratrol, antioxidant phenolika izay ao anaty divay ihany koa, izay afaka misoroka ny lozam-pifamoivoizana sy ny homamiadan'ny nono, anisan'ny aretina maro.
Ny fanararaotana voanjo dia tsy tokony hatao amin'ireo vehivavy bevohoka, satria ny fihinanana be dia be dia mety hiteraka areti-mandringana alikaola izay mety hisy fiantraikany amin'ny foetus. Etsy ankilany, ny voanjo dia mety hijaly noho ny holatra, na dia tsy fahita firy sy kely kokoa aza izany raha toa ka novidiana teny amin'ny magazay lehibe ireo izay laninay.
1 Tombony voanjo
2 Fomba fanjifana voanjo
3 Fananana voanjo
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny voanjo? Na dia manana laza ratsy aza izy io ny voanjo dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny tahan'ny kolesterola ratsy, ho fanampin'izany dia tonga lafatra izy hanomezana fahafaham-po ny filan'ny nofo sy hampitraka ny fanahintsika.
Manana otrikaina mahasoa be dia be ho an'ny vatana izy io Na izany aza, tokony hohanina amin'ny antonony izy io satria sakafo misy kaloria betsaka. Raha ampidirina amin'ny ambaratonga kely amin'ny sakafontsika dia ho salama kokoa isika. Ity misy lisitr'ireo tombontsoa rehetra avy amin'ny voanjo:
Manampy amin'ny fampihenana ny kolesterola: mampihena ny habetsaky ny kolesterola ratsy ary mampitombo ilay tsara. Mitranga izany satria manana menaka tsy voahidy mono-asidra toy ny asidra oleika izay manakana ny aretim-po vokatry ny aretin'ny coronary.
Manomeza teboka eo amin'ny sehatra fitomboana sy fampandrosoana: manankarena be amin'ny proteinina ary ny asidra amine dia tsara amin'ny fitomboana sy ny fivelaran'ny vatan'olombelona.
Manome angovo betsaka: Manankarena vitamina, otrikaina ary mineraly antioxidant, atolotra ho an'ny atleta.
Karakarao ny vavony ary tazomy ny homamiadan'ny vavony: Ny polyphenols izay azontsika avy amin'ny voanjo dia manana fahaizana mampihena ny mety ho voan'ny homamiadan'ny vavony amin'ny fampihenana ny famokarana nitroso-amine karsinogenika.
Mampihena ny ahiahy amin'ny aretim-po, Alzheimer na aretina isan-karazany: Mitranga izany noho ny antioxidant lehibe ao aminy, resveratrol, izay mikarakara ireo mandray azy.
Miaro ny hoditra: ny voanjo dia manana vitamina E, ny vitamina mikarakara ny sela ao amin'ny membrane mucous an'ny hoditra. Miala ny radikaly maimaim-poana ary mijanona ho tanora kokoa ny hodintsika.
Misy vitamina maro: Vitamina B sarotra, niacin, thiamine, riboflavin, vitamina B6, B9 sy maro hafa.
Inona no habetsahan'ny fihinana voanjo?
Manome mineraly betsaka: potasioma, varahina, manganese, maneziôma, calcium, vy, selenium ary zinc no tena hita ao amin'ny firafiny.
Manampy amin'ny fihenan-danja: Na dia vokatra be kaloria aza izany, ny olona zatra mihinana voanjo na dibera voanjo farafahakeliny indroa isan-kerinandro dia mitazona endrika ara-batana tsara kokoa. Ny haavon'ny fiasan-dohan'izy ireo amin'ny fihinanana zavatra matavy sy manankarena dia voky ary tsy dia mora tohina izy ireo eo anelanelan'ny sakafo.
Mampihena ny mety ho voan'ny homamiadana: afaka mampihena ny homamiadan'ny tsinay indrindra amin'ny vehivavy. Raha mihinana dibera voanjo roa sotro lehibe indroa isan-kerinandro isika, dia hanala homamiadana amin'ny fiainantsika hatramin'ny 58% isika.
Mandrindra siramamy ao amin'ny ra: Izany dia vokarina noho ny manganese, izay manampy amin'ny metabôlisma tsara kokoa amin'ny tavy sy gliosida ary misy fiantraikany mivantana amin'ny tahan'ny siramamy ao anaty izany.
Mampitombo ny fahafaha-bevohoka: Ny asidra folika dia mampihena ny mety ateraky ny zaza ao am-bohoka amin'ny tsy fetezan'ny fantsona neural.
Manana ambaratonga avo amin'ny tavy monounsaturated.
olona celiac marary afaka mandray izany tsy misy ahiahy.
Raha lanintsika io dia hahatratra ambaratonga tsaratsara kokoa isika folic asidra.
Ny tavy ao anatiny dia salama, noho izany manampy ny fandanjana ny atin'ny aty ary manampy ny sarakaty hanodinana tsara kokoa ny siramamy.
Voanjo vitsivitsy no miteraka haavon'ny mahafinaritra serotonin izay adika amin'ny ati-doha ho fahatsapana fiadanam-po.
Mitebiteby amin'ny fotoam-pisakafoanana ary ho mpiara-miasa foana handatsaka ireo kilao be loatra ireo.
Manampy antsika izany misoroka aretina aretim-po. Resveratrol dia manakana ny fo tsy hijaly satria mampitombo ny famokarana oksida azota.
Araka ny hitanao dia tsy vitsy ny tombony voanjo ho an'ny fahasalamantsika.
Fomba fanjifana voanjo
Azo atao amin'ny fomba maro ny voanjo:
manta, mahitsy avy amin'ny akorandriaka. Tsy maintsy natsatsika teo aloha mba hahazoana ny antioxidants sy hanatsarana ny tsirony.
Amin'ny endrika fanosotra, fantatra amin'ny anarana hoe totom-boanjo, Izy io dia laniana amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao, na amin'ny saosy, na fitafiana na hiparitahana amin'ny toast.
Menaka voanjo. Izy io dia manana tsiro malefaka sy tena mahasalama, mety tsara ampiana salady na manampy saosy amin'ny saosy rehetra.
Ny fananan'ny pistachio
voanjo misy kaloria be dia be, izay adika ho angovo salama sy tsara indrindra haharitra mandritra ny tontolo andro. Ho an'ny vokatra 100 grama dia mahazo kaloria 567 izahay.
Izy io koa dia misy mineraly, antioxidant ary vitamina. Manome tavy tsy miangona, indrindra ny asidra oleika.
Araka ny efa nolazainay, ireo tavy ireo dia mety tsara esory ny kolesterola ratsy ary ampitomboina ny kolesterola tsara, tonga lafatra ho an'ireo olona rehetra mijaly amin'ity olana arterial ity.
Manome proteinina izy ireo, asidra amine tena ilaina amin'ny fitomboana sy ny fampandrosoana. Etsy ankilany, nisy ny fanadihadiana manamarina fa afaka manampy ity sakafo ity misoroka ny homamiadan'ny vavony, aretina mihena, Alzheimer, aretina viralina na aretim-po, ary noho ny resveratrol, singa iray hita ao anatiny.
Tsy maninona ny fomba laninao azy ireo, aza adino ny mihinana ireo voankazo kely ireo amin'ny fomba antonony, tonga lafatra mba hitandroana ny fahasalamantsika, ampio amin'ny salady, mamorona dibera voanjo anao manokana na mahazo menaka manankarena handrahoana ao anaty grill.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » aretina » Voanjo: tombontsoa sy fanoherana
Adriana Chavez dia hoy izy:
50 taona aho voan'ny tiroida, ohatrinona ny voanjo azoko, milanja 68 kilao aho ary refiko 160. Misaotra betsaka
Mamaly an'i adriana chavez
Incantation dia hoy izy:
Ry namako, heveriko fa efa tokony nanomana ny fandevenana ianao, natao ho an'ny olona voan'ny tiroidida izany ka tsy azonao atao ny mandany azy. Manoro hevitra anao aho hampihena ny tebiteby hihinana kianja karaoty ary koa ny haben'ny voanjo ary ho hitanao ny fomba hampihenanao ny fitaintainana amin'ny 90%, hampihena ny lanjanao amin'ny fomba mahasalama ary hanampy anao hiady amin'ny olan'ny tiroidanao. Ka izao aloha manao veloma ny voanjo raha mila FAHASALAMANA TSARA.
Mamaly ny tsipelina
misaotra anao tamin'ireto fanehoan-kevitra rehetra ireto ... fa mitandrema kosa! ... ireo izay maneho hevitra, ahoana no anohanany azy? Fanadihadiana siantifika inona no ifotoran'izy ireo? Mino aho fa tokony hosoratana miaraka amina andraikitra lehibe. MISAOTRA
Blanca Helena Fonseca dia hoy izy:
Ah! Ny mpahay siansa dia ny siansa fa tsy nisy nanana ny teny farany tamin'ny fihinana voanjo. Ny hany zavatra torin'ny tsirairay dia ny voanjo dia sakafo hanina hampihena, fa inona no antony hanomanana ny fandevenana. Wow. Tsy misy fanohanana na inona na inona, ka tsara kokoa ny manohy mihinana voanjo, mazava ho azy, antenaina miaraka amin'ny voanjo, noho izany dia mihinana fibre isika, tena tsara ao amin'ny tsinay sy ny assimilation ny vitamina E.
. A ary mijaly amin'ny hypothyroidism aho.
Valiny tamin'i Blanca Helena Fonseca
Oscar Ary dia hoy izy:
Efa nodidiana tamin'ny taolana aho herintaona sy sasany lasa izay; manana vato misakana ianao amin'ny tsinaibe sy diverticula. Tena tiako ny mihinana voanjo, manimba ve ny fihinanana azy ireo amin'ny toe-pahasalamako?
Valiny tamin'i Oscar Arria
nelsa dia hoy izy:
Tena nahaliana ahy izany, FA NY FAHALALAKAKO dia ny fampiasana ny voanjo hanary lanja satria izy ireo dia nilaza tamiko momba ny tombontsoa azo avy amin'ny voanjo mba hanafoanana ny razambe ary namporisihina izy io…. Miandry ny hevitrao aho… Misaotra.
Valio amin'i Nelsa
mmm. Vao avy nitsidika an'ity pejy ity aho satria nianatra tany trilce ary namela ahy andraikitra hizaha an'io izy ireo !!
Salama . Mahasoa ve ny voanjo rehefa mijaly amin'ny polycythemia vera?. fiarahabana
Ignatius Infante dia hoy izy:
Miala tsiny fa tsy mifanaraka amin'ny hevitra sasany aho. Ohatra, ny vehivavy bevohoka dia manana antony bebe kokoa handevonana voanjo ary ny mpanoratra ny lahatsoratra dia manamafy fa voadona ho an'ny vehivavy bevohoka izy io. Ny voanjo dia misy folate be dia be, fantatra koa amin'ny anarana hoe folic acid, izay manakana ny tsy fetezan'ny neurologie ao am-bohoka. Ary faharoa, ny olona mijaly amin'ny vato dia hahazo tombony amin'ny fihinanana an'io sakafo io. Ity fampahalalana hitako tamin'ny pejy maromaro amin'ny fitsaboana sy sakafo mahavelona ity. Miarahaba.
Valiny ho an'i Ignacio Infante
vokatra tahionat dia hoy izy:
Manaiky an'i Ignacio Infante aho. Ny voanjo dia misy asidra folic ary amporisihin'izy ireo mandritra ny fitondrana vohoka ...
Valio ireo vokatra tahionat
samy ramirez dia hoy izy:
Fa ny fanontaniana manokana dia ny hoe raha mihena ny voanjo, eny sa tsia, izany no tiako ho fantatra.
Mamaly an'i samy ramirez
Sarah Valencia dia hoy izy:
ny voanjo dia tsy mampihena lanja. ny voanjo dia manana ny haben'ny angovo 571 kcal 2385 kJ. q dia be loatra satria manana kaloria 2385 q dia mitovy amin'ny fihinana akondro 24 eo ho eo ary ny akondro tsirairay dia misy kaloria 100 eo ho eo.
Mamaly an'i sara valencia
Gery dia hoy izy:
Mitovy ny kaloria, rehefa te hihena ianao dia tsy maintsy dinihinao hoe iza amin'ireo singa manampy ny totalin'ireo kaloria ireo, ny fampitahana ny voanjo amin'ny akondro dia tsy misy dikany, satria ny kaloria an'ny akondro dia miorina amin'ny gliosida, ary ny an'ny voanjo amin'ny tavy sy proteinina polyunsaturated ... Ny habetsaky ny kaloria dia mety ho lehibe kokoa noho ny an'ny akondro, fa ny akondro kosa dia be gliosida .. Noho izany raha mihinana akondro 24 ianao dia hihoatra ny siramamy (gliosida) raha tokony hihinana kaloria mitovy amin'ny voanjo ianao, dia mihoatra ny tavy pol izay matavy salama, ary proteinina mampitombo ny hozatrao ... Ary tsy misy dikany ny fihoaram-pefy amin'ny karbôzena satria 20% monja isan'andro no ilain'ny vatanao. ho an'ny angovo. Noho izany, ny habetsaky ny kaloria ao anaty sakafo dia tsy maintsy averina jerena ao anatin'ny latabatra sakafo, izay mahatonga anao matavy dia tsy ny kaloria be loatra, fa ny kaloria no mamorona. Mpiara-miasa lehibe ho ahy ny voanjo satria manampy ahy hanatsara ny fihinanana proteinina, ny voanjo dia tavy mahasalama sy manan-karena proteinina foana, na inona na inona fatran'ny kaloria, dia manampy betsaka amin'ny fihenan-danja satria mampitombo ny tavy hozatra. fiarahabana
Valiny tamin'i Gery
Kambana quilombo inona no anananao, alohan'ny hanomezanao hevitra ao anaty vondrona, ianaro kely.
Carlos Gamarra del Carpio dia hoy izy:
NY FIAFAKAKAKO ISAKELY 66 TAONA, efa tsy nahomby aho fa afaka mihinana voanjo)
Mamaly an'i carlos gamarra del carpio
mankanesa any amin'ny mpahay sakafo ..
Mamaly an'i analia
John Daniel dia hoy izy:
15 taona aho, mirefy 164 cm ary milanja 51,5 kg. Nilaza ny mpihinan-kohanina fa mihinana voanjo voanjo ½, na dia normal aza ny tavy, tsy dia be loatra.
Valiny tamin'i Juan Daniel
Mila fanampiana ny mpitsabo sakafo, hoy aho tamin'ny sakafo voanjo ½ kaopy na dia tavy ara-dalàna aza dia tsy dem
Te hahafantatra aho raha very lanja ny voanjo
Mamaly an'i katty
ny fomba fanjifana very lanja
Jose Valdes dia hoy izy:
Tokony ho ao an-tsain'izy ireo fa ny voanjo dia misy goitrogens izay tsy tokony ho lanin'ny olona manana olana tiroida .. .. ny tsy azoko antoka raha ny fanendahana azy ireo no manala azy….
Valiny tamin'i José Valdés
Mafalda dia hoy izy:
mirary alina .. manana dibera voanjo aho .. mandritra ny herintaona .. voatahiry ao anaty vata fampangatsiahana .. ahoana no hahafantarako fa simba izany?
Mamaly an'i mafalda
NELSON MORA dia hoy izy:
Ny olona voan'ny CONSTANT Migraine dia mety MONDRIKA NY voanjo masira na hotro
Valiny tamin'i NELSON MORA
Clara Ines Escobar dia hoy izy:
Tandremo ny migraine izay mety tsy mahazaka siramamy. Mampanaintaina an-doha izany.
Valiny tamin'i Clara Inés Escobar
Mary Esther Woollett dia hoy izy:
Ny olona voan'ny hypothyroidism dia voarara tokoa amin'ny voanjo (voankazo tsy voasesika, tsy voahodina), ary raha izany, nahoana?
Valiny tamin'i Maria Esther Woollett
Salama… manana hypothyroidism aho ary tiako ny voanjo …… Afaka misy olona miteny amiko hoe "maninona?" Tsy azoko lany izany ...... Salama sy fisaorana